हस्तमैथुन गर्छन तर सेक्स् गर भन्दा पनि गर्दैनन् !, यो कस्तो समस्या हो ?
काठमाडौं । नमस्कार, मेरो नाम कमल खड्का हो । म अहिले २२ वर्षको भए । मेरो एक जना केटी साथि छिन् । उनलाई यौन सम्पर्क गर्न मन लाग्छ तर मलाई यौन इच्छा हुँदैन किन ? मैले अहिलेसम्म यौन सम्पर्क गरेको पनि छैन । म हस्त मैथुन गर्दै आएको छु । यो कस्तो समस्या हो जानकारी गराउँनु भए आभारी हुने थिए ।
डा. सुमन रुपाखेतीको जवाफ स् प्रेम सम्बन्ध भावनात्मक हुँदा पनि मानिसमा यौन इच्छा नहुन सक्छ । तर पछिल्लो समय यौन सम्पर्कको लागि मात्रै भएपनि प्रेम सम्बन्धमा रहने चलन बढेको छ । यौन सम्बन्धका कारण पछिल्लो समय समाजमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु पनि बढ्दै गएका छन् । मलाई लाग्छ कमलजीले आफ्नी प्रमीकालाई भावनात्मक प्रेम गर्नुहुन्छ ।
तर, प्रेम सम्बन्धमा रहेपछि यौन सम्पर्क पनि महत्वपुर्ण पक्ष हो । प्रेम जीवनमा यौन जीवनलाई नकारेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि मिल्दैन् । यौन सम्पर्क भनेको आपसी समझदारीमा हुने कुरा हो । यसमा दुई जना बिचको भावनात्मक बुझाईको पनि महत्वपुर्ण प्रभाव हुन्छ । उहाँ २२ वर्षको हुनु भयो तर उहाँले आफ्नो प्रमीकाको उमेर खुलाउँनु भएको छैन ।
सामान्यतया उमेरले गर्दा पनि यौन इच्छामा प्रभाव पार्ने गर्दछ । उहाँले आफुले हस्त मैथुन गर्छु भन्नु भएको छ यर्सथ उहाँलाई यौन चाहान नभएको भन्ने पनि होईन । उहाँ आफ्नी प्रमीकासँग भावनात्मक भएको हुनाले पनि यस्तो समस्या आएको हुनुपर्दछ । यो कुनै रोग होईन यसमा दुई जना बिचको सोचको तालमेल नभएर यस्तो भएको हो ।
कमलजीले आफ्नो साथिसँग सबै कुरा खुलेरै भन्नुपर्दछ । उहाँले आफुलाई कमजोर छु भन्ने सोचेर भन्दा पनि हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्दछ । यो विल्कुल मानसिक समस्या हो र मानसिक रुपमा नै समधान निस्कन्छ । उहाँ पुरानो नेपाली समाजमा हुर्किएको जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँले आफ्नो सोचलाई बद्ल्न आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालमा प्रतिबर्ष २० हजार युवालाई लागुऔषधले बर्बाद बनाउँदै
काठमाडौं । नेपालमा हरेक वर्ष करिब २० हजार युवा–युवती कडा किसिमको लागुऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले ०६९ मा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा ९१ हजार प..
काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनमा दिनहुँजसो कोही छोरी, कोही बुहारी त कोही श्रीमती हराएको भन्दै खोजतलासका लागि निवेदन पर्ने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएको छ । परिसरका प्..
आँखामा समस्या छ ? गर्मीमा यसरी जोगाउनुहोस् आँखा
काठमाडौं । गर्मी बढेसँगै आँखा सम्बन्धि अनेकन समस्याहरु देखिन थालेको छ । आँखा पोल्ने, आँखा पाक्ने जस्ता समस्याबाट गर्मी मौसममा जोगिन निकै मुस्किल पर्ने गर्दछ । अझै रोग..
सदरमुकाममै शौचालय नभएको खुला दिशामुक्त जिल्ला
बैतडी । ठूलो धनराशि खर्च गरेर बैतडीलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो तर सदरमुकाममै सार्वजनिक शौचालय छैन । जताततै खुला दिसापिसाब गर्ने गरिएको छ । सरकारी तथा गैरसरक..